Rikoorada laga diiwaan geliyey qaybta hore Kulanka Mucjisada ah ee Spain iyo England+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Rikoorada laga diiwaan geliyey qaybta hore Kulanka Mucjisada ah ee Spain iyo England+Sawiro
(16-10-2018) Cayaaryahanka kooxda Manchester City iyo xulka dalka England ee Raheem Sterling ayaa Noqdey Cayaaryahankii koobaad ee Ingiriis ah ee banaanka gool uga dhaliya dalka Spain tan iyo Sanadkii 1987 dii.
Raheem Sterling oo 2 Gool dhaliyey kulan 3-0 England ku Hogaamineyso Spain isla Markaana qaybta hore la soo gaba gabeeyey ayaa Noqdey Xiddigii koobaad ee Gool ku dhaliya Ciida Spain tan iyo GaryLineker Sanadkii 1987 dii.
Sidoo kale Waa markii koobaad tan iyo 1980 kii ee qaybta hore Spainay Gool ka dhalin waayaan England halka Raheem Sterling Taariikhda Markii koobaad uu 2 Gool u dhaliyo England hal Kulan sidoo kale waa markii koobaad ee uu Harry Kane caawiyo 2 Gool.
Sidoo kale Waa Goolkii koobaad ee uu Raheem Sterling u dhaliyo Gool xulka England tan iyo bishii October 2015 halka Goolka 3 aad uu dhaliyey Xiddiga manchester united ee Marcus Rashford.
Dhanka kale waa markii koobaad ee Taariikhda 3 Gool looga dhaliyo Spain oo joogta ciideeda aad ayaana looga gacan sareeya Goolal kale oo badana England waa dhalin kartaa hadii ay u Cayaaraan sidii qaybta hore.